Celebrity – Page 8 – Cele Seven
ပရိတ္သတ္ေတြကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေစရတဲ့ အဖြားေမြးေန႔မွာ Live လႊင့္ရင္းစကားေျပာေနတဲ့ အဆိုေတာ္ မီးမီးခဲ ရဲ့ သားေလး….
တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေကို အဖီးသီချင်းလေးတွေ နဲ့ ယနေ့ချိန်ထိ တိုင်အောင် ပရိသတ်တွေ နားထောင်နေရတုန်း ကတော့ မီးမီးခဲ ရဲ့ သီချင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအပြီး တိုင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာ ကြာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမ မရှိတော့ပေမယ့် လည်း …
March 17, 2022 By LY C Celebrity
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လၽွပ္စစ္မီးအခက္အခဲေၾကာင့္ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကိုေျပာျပလာတဲ့ ထိပ္ထားသခင္ ရဲ့ဗီဒီယို……
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းမှာ နေရာတစ်ခု ကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင် ခဲ့တဲ့ ထိပ်ထားသခင် ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်း မှာ လျှောက်လမ်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ကို ဆွတ်ခူးထား နိုင်ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင် …
March 15, 2022 By LY C Celebrity
အခုချိန်ကျမှဘာလို့များအညှိုးတကြီးနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲ ?လို့ အဆိုတော် အောင်လကို ပေါ်တင်ဘဲမေးလိုက်တဲ့ ရေမွန်ညီမ…….
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ရေမွန် ကတော့အမှန်တရားအတွက် ပြည်သူနဲ့ အတူတိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော် အောင်လကရေမွန်ရဲ့နာရေးကူငွေတွေအားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်သွားတဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိခင်နဲ့ညီမ ဖြစ်သူကိုသိန်း ၁ထောင်က မလုံလောက်သေးဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ အတွက်၊တေသူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့မလုံလောက်ဘူး။လောကမှာ စောက်ဆံက အရေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒါ ဘိုစော ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာ …
March 14, 2022 By LY C Celebrity
လတ္တေလာ လူ႔မႈကြန္ယက္ေပၚမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဆိုေတာ္ ေအာင္လနဲ႔ ေရမြန္တို႔မိသားစု အေၾကာင္း…..
ပရိသတ်ကြီးရေ Facebook Twitter ရေမွန်နဲ့ SIR အဖွဲ့ဆိုပြီး သီချင်းတွေ အတူတူဆိုခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော်အောင်လဟာ ရေမွန်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ရေမွန် နဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ လို ခင်မင်ရင်းနှီး ခဲ့ ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ …
ဘယ္လိုေနေနၾကည့္ေကာင္း ေနတဲ့ ညီမေလးေတြနဲ႔ မမေတြရဲ့ အသဲစြဲ ပိုင္တံခြန္ ရဲ့ ဗီဒီယို…..
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန် ကတော့ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပြည်ပက ပရိတ်သတ်တွေကပါသည်းသည်းလှုပ် အားပေး ဝန်းရံခံရတဲ့ မင်းသားချောလေး တစ်ယောက်ပါ။ တံခွန်က တောင့်တင်း ကျစ်လျစ်တဲ့ဘော်ဒီ အမိုက်စားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် …
March 13, 2022 By LY C Celebrity
ခက္ခက္ခဲခဲေျပးလႊားေနခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆုံးေကၽြးခဲ့တဲ့ ထမင္းပြဲေလးကို သတိရေနမွာပါလို႔ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္း……
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သူရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကို လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပါမှာ ၊ သူဟာအောင်မြင်ကျော်ကြားနဲ့နံမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်လည်းမင်းမော်ကွန်းဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရရာလက်နက်ကိုဆွဲကိုင်ဖို့ လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေကို တိမ်းရှောင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူရွှင်တော် ဖိုးဖြူဟာဆိုရင်ဖြင့် မတ်လ ၁၁ ရက်နေမှာဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားပါတယ်၊သရုပ်ဆောင်ဖိုးဖြူ နဲ့ အမှတ်တရာတွေကို ယခုလိုပဲပြန်ပြောလာပါတယ်၊ကျွန်တော်ပြေးလွှားနေတုန်းကဦးဖြူ နောက်ဆုံးကျွေးခဲ့တဲ့ …
March 12, 2022 By LY C Celebrity
သူ႔ဘဝတည္းက ထြက္ခြာသြားခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူ မေမ အတြက္ ရည္စူးၿပီးဆြမ္းကပ္လႉခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ညီထြဋ္ေခါင္…
ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင် ကတော့ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ မှာ ကျရောက် ဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံး နဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညီထွဋ်ခေါင် ဟာ လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာအလုပ် တွေကို ရပ်နားထားပြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ …
March 11, 2022 By LY C Celebrity
ကဲခ်စ္တို႔ေရ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခ်စ္တို႔နဲ႔ ဆုံဖို႔ ပိုင္တံခြန္ ေလးကေျပာျပထားတယ္ေနာ္……
သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန်ကတော့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မတရားဖမ်းစီးခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကစရဲ့ အနုပညာဖြင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နဲ့ ပိုင်တံခွန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ …
March 10, 2022 By LY C Celebrity
အေဝးေရာက္ေနတဲ့ ဆရာကိုေတာင္ ဗီဒီယို CALL နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့ မင္းသားေခ်ာေလး ပိုင္တံခြန္………
ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးရေ ဂျွန်လွင် ကတော့ အနုပညာလောကမှာ မော်ဒယ်လ် နဲ့ မင်းသမီးမင်းသားတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးနေတဲ့Stars and Models int’l အေဂျင်စီရဲ့ ​တည်ထောင် သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး မင်းသမီး မင်းသားများစွာ သူ့ရဲ့သင်ကြားမှုလက်အောက်ကနေအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမနည်းမနော ပါပဲနော်။ …
ပုရိသေတြရဲ့ အသဲစြဲ နန္းေမြစံ ရဲ့ ဝင္ေငြႀကီးကလည္းေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္တယ္ေနာ္…………
ပရိသတ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ sexy မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန်းမွေစံ ကတော့အမိုက်စားဘော်ဒီ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကြော င့် ပုရိသတွေရဲ့အသည်းစွဲအားပေးမှုရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာ မော်ဒယ် နန်းမွေစံက အနုပညာအလုပ်တွေ အပြင် only fan ဆိုတဲ့ website …
March 9, 2022 By LY C Celebrity